Izindaba - Ungayikhetha kanjani into enhle yokufaka izinto eziphilayo?
Ungayikhetha kanjani into eguquguqukayo yokufaka izinto eziphilayo?
1. Yini okufanele ibhekwe lapho uthenga izinto eziguquguqukayo zokufaka izinto online? Ungakwenza kanjani ukukhetha okulungile?
Ukuthengwa kwe-inthanethi kwezinto eziguquguqukayo zokuxhuma eziphilayo kusho ukuthi umkhiqizo uthengwa kuwebhusayithi yomkhakha. Ngakho-ke, kukhona okunye ukucatshangelwa okufanele noma izici ezidinga ukucatshangelwa. Ngaphezu kwalokho, uma kuhlobene nokuthengwa komkhiqizo, kubalulekile ukucatshangelwa okubalulekile futhi okudingekayo, okumele kugxilwe kukho. Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi ubheke izinto, njengomsuka womkhiqizo, imininingwane namamodeli, usayizi, amapharamitha, ikhwalithi yomkhiqizo nentengo, kanye nomenzi.
Uma ufuna ukukhetha kahle, udinga ukwenza la maphuzu amabili alandelayo: okokuqala, udinga ukwenza umsebenzi wokulungiselela ngaphambi kokuthenga imikhiqizo, ukuze ukwazi okwaziyo; okwesibili, lapho uthenga imikhiqizo, kufanele ucabangele zonke izinto ezifanele, futhi kufanele ucabangisise kahle, ukuze ukwazi ukwahlulela ngokunembile. La maphuzu amabili angenhla angatholakala.
2. Ngabe abakhiqizi bezinto eziguquguqukayo zokufaka izinto eziphilayo badinga isitifiketi esithile?
Abenzi bezinto zokuxhuma eziguquguqukayo zezinto eziphilayo badinga ukwenza umsebenzi wesitifiketi, ngoba lo msebenzi ungaletha izinzuzo ezithile, njengokuthuthukisa ukuncintisana kwabakhiqizi nemikhiqizo yabo emakethe, nokwenza ngcono izinzuzo zezomnotho zabakhiqizi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthatha lo msebenzi ngokungathí sina. Ngaphezu kwalokho, kunezinto ezimbili ezihilelekile ekuphathweni kwekhwalithi.
3. Yiziphi izidingo ezithile nezisisekelo zezinto zokufaka eziphilayo eziguquguqukayo?
I-Flexible organic plugging material, enezidingo ezithile ezithile nezisisekelo emikhiqizweni, yile: ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kwemishini, amamodeli ahlukahlukene nokucaciswa, izindleko eziphansi zohlelo, izinto ezahlukahlukene okufanele zicutshungulwe. Ngokuya ngemodi yokusebenza, ingaqhutshwa ngokuqhubekayo noma ngezikhathi ezithile, futhi izindleko zokusebenza ziphansi futhi ukusebenza kulula futhi kulula. Ekusebenziseni, lolu hlobo lwezinto zokuxhuma lungasetshenziswa emikhakheni eminingi. Kubakhiqizi bayo, ikhwalithi yomkhiqizo ingaqinisekiswa futhi umkhiqizo ungenziwa ngezifiso njengoba kudingeka.